Shimbiraha kaymaha Amazon | Safarka Absolut
Muddo tobanaan sano ah khabiirada qurxinta iyo dabeecadaha jecel adduunka oo idil waxay u safreen Koonfurta Ameerika si ay ugu kuur galaan taajirnimada iyo midabka noocyo badan oo shimbiro ah oo ku jira keymo Amazon.
Kani maahan tababar bilaash ah: horaantii 1970, Swiss-American ornithologist Rodolphe Meyer oo ka tirsan Schauensee wuxuu ku sheegay shaqadiisa "Hagaha haadda Koonfurta Ameerika" (Tilmaamaha hagaha Koonfurta Ameerika) in aduunka uusan ka jirin gobol leh noocyo badan oo shimbiro ah sida Amazon.
Hadana sidaas oo ay tahay, samaynta liistada dhammeystiran ee dhammaan shimbiraha ku nool qaybtan adduunka waa hawl adag. Waxaa lagu qiyaasaa in gobolka oo dhan (oo ay ku jiraan inta badan Brazil, Venezuela, Colombia, Peru iyo dowlado kale), tirada guud waxay noqonaysaa ku dhowaad 1.300 oo nooc. Kuwaas, qiyaastii badh ayaa noqon doona cudud leh.
Si loo gaaro gabagabada, tirakoobka tirada shimbiraha ee keymaha Amazon ee ay maamulaan ururo kala duwan ayaa loo qaatay aasaas ahaan. Qaar ka mid ah noocyadan waxaa laga helaa oo keliya deegaanno goboleedyo gaar ah, halka kuwa kale ay ka badan yihiin ama ka yar yihiin si isku mid ah uguna qaybsan dhammaan Amazon.
Waa kuwan muunad ka mid ah shimbiraha ugu wakiilka badan keymaha Amazon:
2 Hummingbirds iyo shimbiraha yaryar
3 Gallinaceae iyo mallards
4 Baqbalo iyo Macawis
5 Shimbiraha wax dila
Gobolka Amazon wuxuu hoy u yahay noocyo kala duwan oo kufsadayaal ah kuwa adduunka ku gaar ah. Waxa ugu fiican ee la yaqaan waa Gorgor xarago leh (harpyja), kaas oo hadda loogu hanjabayo inuu dabar go’ayo. Si kastaba ha noqotee, wali waxaa laga heli karaa Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Peru, Suriname, French Guyana, koonfur-bari Brazil, iyo waqooyiga Argentina.
Gorgor xarago leh
Iyada oo ku dhowaad laba mitir oo baal baal ah, waa gorgorrada adduunka ugu weyn. Cawlkeeda cawl, caddaan iyo madow waa, oo ay weheliso jilitaankeeda gaarka ah, astaamaha ugu muhiimsan ee lagu garto.
Shimbiraha kale ee caadiga ah ee ugaarsiga gobolkan ayaa ah Galaydh macaan (Micrastur mintori) mowjad guumays muuqaal ah (Pulsatix perspicillata).
Hummingbirds iyo shimbiraha yaryar
Kooxda shimbiraha ee ugu badan keymaha Amazon shaki la’aan shimbiraha yaryar, ma heesayaan iyo maahan. Waxaa ka mid ah noocyo aad u matalaya sida hummingbird topaz (topaz pella), oo leh dabo dhaadheer oo degdeg ah. Shimbirtan quruxda badan waxay leedahay caleemo dhalaalaysa oo qurux badan waxayna u isticmaashaa afkeeda fiican si ay u nuugto manka ubaxa. Waxaa si ballaaran loogu qaybiyey gobolka oo dhan.
Waxaa jira shimbiro badan oo yaryar oo ku yaal Amazon, oo ah buugga weyn. Si aad u sheegto mid ka mid ah kuwa ugu caansan, waxaan xusi doonnaa guntin cas (Dendrocolaptes picummus), taas oo ah nooc ka mid ah qoryaha. Xusuus gaar ah shimbir dhexdhexaad ah, laakiin aad u qalaad oo caan ah shimbiraha: the toucan (Ramphastos wuu ciyaaray), oo aad loogu aqoonsan karo afkeeda weyn.
Gallinaceae iyo mallards
Waxaa jira shimbiro kale oo badan oo ku jira keymo-Amazon oo naga yaabi doona. Noocyada qoyska 'gallinaceae' waxay leeyihiin lugaha adag, jilayaal gaagaaban, guud ahaanna ma awoodaan inay duulaan ama waxay awoodaan oo keliya duulimaadyo gaagaaban oo joog hoose ku socda.
Qeybtaan waxaa ka muuqda camungo (Anhima cornuta), shimbir u eg turkey oo si fudud lagu garan karo barar yar oo ka soo baxa afkiisa.
Gobol leh wabiyaal badan, kanaallo iyo harooyin sida Amazon, waa macquul in la helo shimbiro badan oo ka tirsan qoyska shinbiraha, taasi waa, shinbiraha iyo wixii la mid ah. Ku Orinoco goose ama duck wigeon Waa laba nooc oo aad u caan ah, iyagoon ilaawin peccary, duck duurjoogta oo cajaladdeeda midabbo badan leh.
Baqbalo iyo Macawis
Shimbirka noocan ah shaki la’aan waa kan ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca marka aan ka fikirno xoolaha reer Amazon. Waxaa jira noocyo badan oo macaws ah, oo cabirro kala duwan leh iyo astaamo jireed. Ku hyacinth macaw (Caanoodorhynchus Hyacinthinus), oo sidoo kale loo yaqaan 'macaw buluug', ayaa laga yaabaa inuu yahay kan ugu caansan. Waxay leedahay boog caashaq leh oo buluug u badan, baalal dahab ahna garka ku leh. Nasiib darrose, waa nooc aad khatar ugu jira.
Noocyada kale ee aadka u layaabka badan ayaa ah garabka cagaaran macaw (Chloroptera), oo laga heli karo qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolka Amazon. Xayawaanadan waxaa lagu kala gartaa xoogga afkooda, caqligooda iyo cimri dhererkooda, maadaama ay noolaan karaan 60 sano ama ka badan.
Shimbiraha wax dila
Noocyada shimbiraha ee loo yaqaan 'Carrion', kuwaas oo quudin jiray haraadiga xayawaannada kale ee dhintay. Waxa kale oo aad ka heli kartaa noocan shimbiraha ah kaymaha Amazon. Dhexdooda, waxaa jira mid ka dhex muuqda inta kale: the boqorka gorgorka (Aabaha Sarcoramphus). Maaha xayawaan si gaar ah u karaamo badan maxaa yeelay dhibco iyo midabbo midabbo leh oo wajigiisa kharribma.
Si kastaba ha noqotee, waa in la aqoonsadaa in, sida qaraabada Andean ay KondorWaxay leedahay hawo aristocratic gaar ah oo ka dhigaysa mid si gaar ah soo jiidasho leh. Waxay kuxirantahay bedka Amazon ee ay ku nooshahay, shimbirtaan waxay heshaa magacyo kala duwan, sida kondor hawd o king zamuro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Shimbiraha kaymaha Amazon